China Yepamusoro mhando Industrial Robotic Arm shandisa Slew Drive fekitori uye vagadziri | Wanda
Slew drive inonunura yakavimbika uye yekuchengetedza-yemahara mashandiro mumaindasitiri mafomu. Inogona kushandiswa muRobotic ruoko. Kugadzira zvirimwa uye michina yekushandisa maindasitirikudhiraivha kutyairas kusimba kwesimba uye kudzora kutenderera torque. Mechanical michina uye marobhoti zvinovimba nazvokudhiraivha kutyairas yekumisikidza kurongeka uye kusagadzikana kuita.
Robotic maoko michina michina ine majoini anogona kukotama uye kutenderera. Dzinotyairwa nekombuta-inodzorwa mota dzemagetsi. Zvishandiso zvinogona kuiswa kune 'ruoko' kumagumo kwemaoko, uye komputa yakarongedzwa kuti iite ivo kuti vaite mabasa akasiyana, sekucheka, kuboora, kumwaya, uye kupenda. Ivo anoshandiswawo kune zvine njodzi mabasa senge kubata radioactive zvinhu kana zvisina kuzivikanwa mabhomba.
Iine dhizaini yakakomberedzwa mazino mamiriro, WEA Slewing drive ine zvirinani kurwisa-kuneta uye kubatanidza kugona, iyo inokodzera inorema-basa, yepakati-kumhanya kunyorera, inokodzera Robotic Arm kunyorera.
Iwe unogona kuona iyo catalog yeiyo WEA Slewing drive.
Iyo slewing dhiraivha iri giya bhokisi iro rinogona kuchengetedza zvakachengetedzeka nehuremu uye axial mitoro, pamwe nekufambisa torque yekutenderera. Iko kutenderera kunogona kuve mune imwechete axis, kana mune akawanda matemo pamwechete. Zvifambiso zvinotsvedza zvinogadzirwa nekugadzira gearing, mabheyaringi, zvisimbiso, dzimba, mota nezvimwe zvinobatsira uye nekuzviunganidza mubhokisi rakapedzwa.
Iyo inotyaira mota inoshandisa chaiyo kinematics kupa hukuru hukuru hweiyo imwechete-danho gearing. Mabheyari uye magiya akaunganidzwa kuita diki, inozvimiririra, uye yakagadzirira-kuisa-kesi yekuwedzera uremu nekuita.Xuzhou Wanda slewing inobereka co., Ltd semunhu ane ruzivo akauraya kutyaira mugadziri, isu tinokwanisa kupa yemhando yepamusoro yakauraya madhiraivha.
Pashure: yakakura dhayamita ina poindi yekuonana bhora turntable inobereka irobhoti
Zvadaro: imwe chete bhora turntable slewing mhete inotakura neyekunze giya
WEA Series yakauraya kutyaira
WEA14 Heavy Type Slewing Dhiraivha Ye Mist Cannon ...